Pharyngitis amin'ny fitondrana vohoka
Na dia aretina toy ny aretim-bary toy izany aza, mandritra ny fitondrana vohoka dia mety miteraka fahasarotana sasantsasany, amin'ny fiheverana ny fiantraikan'ny fanafody eo amin'ny foetus sy ny mety ho fahasarotana.
Ny aretina mampihetsi-po ny tsiranoka mivalona amin'ny tendany. Ao amin'ny vehivavy bevohoka, ny antony mahatonga ny tsy fahatsiarovan-tena dia matetika ny lalànan'ny fifindran'ny aretina, ny toerana fialokalofana azy ireo dia ny volombava sy ny lymph.
Mihamahia ve ny dianjan'ny vehivavy bevohoka?
Ny tena mampidi-doza dia aretina eo amin'ny dingana voalohany amin'ny fitondrana vohoka. Ny mpandidy ny aretina eo amin'ny vatan'ny reny eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 50% dia miteraka loza mitatao amin'ny fikarakarana zaza tsy ampy taona, aretina entina amin'ny foetus na ny tsy fahampian-tsakafo, izay mety hiteraka fahataran'ny fivoarana sy ny hypoxia mitaiza (tsy fisian'ny oksizenina) amin'ny foetus.
Soritraretana mahazatra momba ny aretina
Hamarino fa ny antibiotika amin'ny vehivavy bevohoka dia hanampy ireto soritr'aretina manaraka ireto:
mampitombo ny hafanana amin'ny vatany eo amin'ny 37,5 degre eo ho eo;
kohaka noho ny fikorianan'ny tsiranoka marefo eo amin'ny rindrina aoriana ao amin'ny pharynx;
Fanaintainana manokana eo amin'ny tenda (fanaratsiana na fifindrana), izay mihamangatsiaka amin'ny fitomboan'ny saliva.
Ankoatra izany, dia mety ho hafanana haingana fotsiny ny fihenjanana mahatsiravina mandritra ny fitondrana vohoka.
Fomba entina miteraka aretina mandritra ny fitondrana vohoka
Mba handresena ny fanaintainan-jaza ao amin'ny vehivavy bevohoka, dokotera dia tsy maintsy mandidy ny fitsaboana. Matetika ny fitsaboana tsotra no mahatonga ny aretina:
mitambatra amin'ny vulcate de furacilin, chlorhexidine, tincture ny propolis na ny famokarana ny kamomile;
fisintonana tsy tapaka amin'ny fanesorana ny poti-tsimaka, planta na melissa;
tabilao fananganana antiseptika, izay tsy voarara mandritry ny fitondrana vohoka sy ny lactation ("Lizobakt", "Faringopils" na "Pharyngocept");
fanangonam-bolo amin'ny grenady / spray ("Geksoral", "Bioparox", "Tantum Verde").
Raha ilaina, ny dokotera dia manoro hevitra sy fanafody antipiretika.
Rehefa miaraka amin'ny fomba fitsaboana fanafody mba hanasitranana ny pharyngitis mandritra ny fitondrana vohoka, dia hanampy ireto manaraka ireto ny fitsipika manaraka:
Misotroa rano mangatsiaka be;
matetika mameno efitrano;
afa-tsy ny sakafo mifoka sigara, sira, sakafo matsiro ary marefo;
atsangano ny soda;
Mandiniha fitondrana semi-fast na fitsaharana araka izay azo atao;
Miala lahatra, mba hahitana fitsaboana faran'izay mafy ny ligam-pitana.
Aza mamono tena, raha tsy izany dia mety hiteraka aretina mitaiza be mandritra ny fitondrana vohoka ilay endrika malefaka. Amin'ity toe-javatra ity dia esory fotsiny ilay aretina aorian'ny nahaterahan'ny zazakely, raha toa ka mihamitombo ny tahan'ny fanafody.
Vitrum prenatal forte ho an'ny vehivavy bevohoka
Tablets avy amin'ny tsindry amin'ny fitondrana vohoka
Inona no mety ho bevohoka amin'ny famonoana?
Ny herisetra dia herinandro 33 - ny lanjan'ny foetus
Fetisy amin'ny herinandro faha-10 amin'ny maha-bevohoka azy
Fluconazole amin'ny maha-bevohoka
TTG amin'ny fitondrana vohoka
Volana fanangonam-bolan'ny Guerlain 2016
Pearl ny sakafo ho an'ny fahavoazana
Julienne miaraka amin'ny holatra - recipe
Fofona trofika amin'ny tongotra - ny antony
Sarin'ny trano fandroana
Ny fandoavam-paritra isam-bolana ho an'ny zaza
Mijanona ao amin'ny farihy Uvildy
Ahoana no tokony hohaninao mba hitomboan'ny hozatra?
Cosmetics ho an'ny vehivavy bevohoka
DJ Tiesto dia nanao tolotra ny modely tanora Annika Bakes
Ny zanaka dia manana kisoa ao ambadiky ny sofina
Broccoli ao anaty lafaoro
Serotonina amin'ny takelaka
Ny volom-borona 2018 - ny fironana eo amin'ny lamaody sy ny fironana eo amin'ny fanamboarana ny hoditra amin'ity vanim-potoana ity
Dibera Bushnut - varieties
Sakafo am-bifotsy ao anaty lafaoro - 10 fomba tsara indrindra amin'ny fitsapana sy ny fofona manitra